Malunga nathi - Anping Zhuona wocingo Co., Ltd.
Icebo lokucoca ulwelo olucocekileyo
Icebo lokucoca iSilinda
Icebo lokucoca ulwelo Wire
Inkampani Anping Zhuona wocingo Co., Ltd.
Sizimisele ukubonelela ngezihluzi ezisebenza ngokufanelekileyo
AHT / Anping Zhuona wocingo Co., Ltd.kuyinto umenzi ngobungcali ngokuyila, uphando kunye nokuveliswa izinto ezahlukeneyo mveliso kunye neemveliso lokucoca ulwelo. Iimveliso eziphambili zibandakanya i-Sintered wire mesh, Sintered felt, element Pleated filter element, Sintered filter element, Wedge element element, Leaf disc filter, Proclean filter, Filter cartridge, discs Rimed discs kunye nezinye iimveliso zeefilitha. Iimveliso zisetyenziswa kakhulu kwi-petroleum, kwishishini leekhemikhali, kwishishini lokuxuba amayeza, ifayibha yemichiza, i-aerospace kunye nokuhamba ngenqwelomoya, isinyithi, unyango lwamanzi, ukutya kunye nesiselo, ishishini lamachiza amalahle, unyango lweemoto kunye namanye amasimi kunye nemizi-mveliso.
I-Zhuona ineqela le-R & D elineengcali, kunye nezinto ezintsha kunye nophuhliso, sizibophelele ekunikezeleni izihluzo eziphakamileyo, izihluzi ezikumgangatho ophezulu kunye nemveliso yokuhluza ephezulu kwisiphelo kubathengi bethu. Ukususela kuyilo, uphando kwimveliso, besizama konke okusemandleni ethu ukuhlangabezana noyilo lomntu kunye neemfuno ezinokubakho zabathengi, kunye nokubonelela abathengi bethu ngesisombululo sokuhluza esithembekileyo.
Kwangelo xesha, iZhuona inenkqubo engqongqo yolawulo lomgangatho, eyenza ukuba inkampani yethu igcine indawo ephambili kwimveliso kunye nokhuphiswano lwenkonzo. Okwangoku, inkampani yethu iye phambili vacuum sintering izixhobo, yokusebenza eliphezulu-vacuum electron umqadi iwelding umatshini, ngqo kunye nezixhobo zovavanyo ngokupheleleyo, nto leyo ngokuzimeleyo ukugqiba uyilo kunye nokuveliswa kwezinto zokucoca ulwelo kunye lokucoca ulwelo; kwaye uzalise izinto ezahlukeneyo zokucoca ulwelo kunye nococeko lokucoceka kolwelo kunye nohlalutyo lokungcola; gcwalisa zonke iintlobo zokuchongwa kokusebenza kwesihluzi, ukubonelela ngesiqinisekiso esithembakeleyo sophando kunye nophuhliso lweemveliso ezintsha.
I-Zhuona inenkqubo engqongqo yolawulo lomgangatho, eyenza ukuba inkampani yethu igcine indawo ephambili kwimveliso kunye nokhuphiswano lwenkonzo.
-Sizimisele ukubonelela ngezihluzi ezifanelekileyo.
Icebo lokucoca ulwelo Stainless, Iifilitha zomoya, Isihluzi seZithuthi, Isihluzi somoya esineSimbi engenanto, Icebo lokucoca amanzi, Icebo lokucoca ulwelo gesi,